I-Mill House, i-Charndon, i-Bicester - I-Airbnb
I-Mill House, i-Charndon, i-Bicester
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRoger
Wamkelekile kweli gumbi likhulu elilala abantu ababini kwikhaya lethu elizweni.
Indawo yasemaphandleni ipholile kwaye inokuthula, ibe ingenelo lokuya kwiindawo eziliqela zeNational Trust, iSilverstone, iBicester Village, iBuckingham University neOxford kunye neendawo ezininzi zomtshato zasekuhlaleni
Le ndlu icocekile, inazo zonke izinto ezinokusetyenziswa eziqhelekileyo. Uza kukwazi ukufikelela kwi-microwave yasekhitshini/ifriji xa kuyimfuneko. Siza kukunika isidlo sakusasa seti, ikofu, i-toast kunye necereal. Ukuze uhlale kamnandi, uza kufumana nasegumbini: - iitawuli ezicocekileyo nezinto zebhedi, isixhobo sokomisa iinwele, i-shower gel ne-shampoo, i-intanethi ye-Wifi - kunye neeseti zokutshaja i-usb
Zive ukhululekile ukusijoyina kwindawo yokuphumla ngokuhlwa.
Iindwendwe ziyakwazi ukungena kwindawo yokupaka eyaneleyo
Sineenja ezimbini ezabelana ngendlu yethu kodwa zilinganiselwe ezantsi kunye negumbi lazo lokulala
I-Charndon yilali entle yasemaphandleni engqonge i-Oxfordshire ne-Buckinghamshire, ejikelezwe ziindlela ezininzi zikawonke-wonke ezilandela iindlela zakudala ezihamba neendawo ezintle. Iidolophu zaseBicester, eOxford, eBuckingham naseAylesbury zonke zikumgama omfutshane ngemoto njengokuba injalo isangqa sohlanga lweSilverstone
Ngokuqhelekileyo sise okanye sisekhaya, ngoko siza kukucebisa ngayo nantoni na ukuze uhlale kamnandi, akukho nto ihluphayo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charndon